दोधार चिन्तन- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २०, २०७४ कुमारी लामा
आफैंलाई आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी ठानेर मेरो लेखक ऊसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्छ । एकपछिको अर्को लेखनले लेखिसकेको असन्तोषमा सधैँभरि गुनासो र संघर्ष गरिरहन्छ ।
मीठो सत्य बोलिरहेछ साहित्यकार कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानका यी भनाइले । प्रत्येक लेखक आफैंसँग प्रतिस्पर्धा गर्छ । अघिल्लोभन्दा राम्रो सिर्जना गर्नु र पाठकको मन जित्नु । सायद यही ध्याउन्नमा पुस्तकको निकै लामो सूची तयार पारिसक्छ लेखक । बाह्रौं कृतिका कृतिकार भइसकेका छन् श्रीओम श्रेष्ठ रोदन पनि । कवि, कथाकार, निबन्धकार, पत्रकार जे सम्बोधन पनि फिट हुन्छ उनका लागि । उनी लामो समयदेखि यी सबै क्षेत्रमा कर्मशील छन् । तर मेरो लागि भने उनी निबन्धकार नै हुन् । उनले निबन्ध नै धेरै लेखेका छन् । उनको पछिल्लो निबन्ध संग्रह हो
‘भनौँ कि नभनौँ’ ।
भनौँ कि नभनौँ, एक दोधार चिन्तन, कन्फ्युजन, अलिक अक्मकाइको अवस्था । हामी बाँच्दै गरेको परिवेश स्वयं काठमाडौंको कुइरिमण्डल आकाशजस्तै छ धूमिल अनि अस्वास्थ्यकर । यो दोधार लेखकको भोगाइ हो । उनको भोगाइमा सामेल भइदिन्छ हाम्रा भोगाइहरू पनि । हामी उही समय जो बाँच्दै छौँ । श्रीओमका अभिव्यक्ति बहुत् कोमल छन् । उनले छानेको विषय र प्रस्तुत गरेको शैली हेर्दा लाग्छ उनी साह्रै जतन गरी खेलाउँछन् विषय र शब्दहरू । उनी मूलत: अनुभूतिको गहिराइबाट अभिब्यक्त हुन्छन् । उनका आत्मपरक शैलीमा लेखिएका निबन्धहरू मुख्यत: मानवीय सम्बन्ध, संवेदना र उनका निजी अनुभूति केन्द्रित छन् ।
निबन्ध सिमानामा उँघिरहेको बिधा भएको हो कि जस्तो लाग्छ । केन्द्र र सीमा नाप्ने अनेकन मापदण्ड होलान् । सबैभन्द प्रस्ट देखिएको त बजार नै हो । निबन्ध सायद नबिक्ने बिधा हो । बिक्नुसँग खास सरोकार नराखी निरन्तर निबन्ध कर्ममै लाग्नु साहस हो लेखकको । रोशन शेरचन पनि उसैगरी खुरुखुरु लागिरहेका छन् यही कर्ममा । लाग्छ औँलामै गन्न सकिन्छ यस बिधालाई अँगालिबस्नेहरू । निर्बन्ध बिधा हुँदै हो निबन्ध तब न लेखक स्वतन्त्र छ जे, जसरी लेख्न पनि । तर श्रीओम असाध्यै अनुशासित लाग्छन् । सबै हिसाबले उनी वेल डिसिप्लिन्ड । उनले प्रयोग गर्ने भाषा बहुत नापतौल गरी प्रयोग गरेजस्तो लाग्छ । साह्रै शालीन शब्दहरू प्रयोग गर्छन् उनी । अलिकति अराजकता पस्किएको भए पनि हुन्थ्यो नि झैँ भएको हो पढ्दै गर्दा । ‘आग्लो नलगाउँदा’ नामक निबन्धमा उनी ‘कन्फेसनल मुड’मा देखिन्छन् । युवाकालीन प्रेमको विषय उजागर गर्ने कोसिस छ तर उनी समाउँछन् अमूर्त वर्णनको बाटो । केही भनूँजस्तो गर्दागर्दै उनलाई फेरि केही सामाजिक मान्यताहरूले थिचेझैँ लाग्छ । थोरै अराजक भइदिएको भए ? (एउटा पाठकीय थकथकाइ)
अमेरिका बसाइका केही संस्मरणहरू, केही ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूसँगको सामीप्यको संस्मरण र केही ब्यक्तिगत भोगाइका फेहरिस्त । यही हुन् मुख्यत: श्रीओमका निबन्धका विषयहरू । जीवनका मसिना मानिएका कुराहरूप्रतिको उनको चनाखो दृष्टि र विश्लेषणले एकपटक सोच्न बाध्य पार्छन् । मेजर कि माइनर ? नामक निबन्धमा डाक्टरका लागि माइनर मानिएको अपरेसन पनि एउटा बिरामीका लागि कतिसम्म मेजर महसुस हुन सक्छ भन्ने उनको आफ्नै मुटुको अपरेसनसँग जोडेर बाँडेको अनुभूतिले पाठकलाई एक छिन चिन्तन गर्न बाध्य पार्छ । उनको निबन्धमा बारम्बार आइरहने कुरा भनेको अस्तित्व चेत हो । उनी अमेरिकामा पुगेका छन् तर देश र परिवारबाट टाढा हुनुको पीडाले गाँजिन्छन् । यही प्रसंगको निबन्ध उनको अघिल्लो संग्रह एक्लो परिचयमा पनि आएको छ । उनी धेरैको स्वप्ननगरी अमेरिकामा भएका अनेकन विकृतिका पाटाहरू खोतलिदिन्छन् । यस्तो खुला समाजमा पनि विद्यमान यौन हिंसाका कुरादेखि मानवीय कमजोरी र आपराधिक मनोविज्ञान लिएर हिँडिरहेका डेबिडजस्ताको प्रसंग ल्याउँछन् ।
उनको निबन्धलेखन यात्रालाई नियाल्दा लाग्छ, उनी अमूर्त र एकतमासे मनोसंवेगको चंगुलबाट अब सरल र स्पष्ट अभिव्यक्तिको मैदानमा उत्रिएका छन् । अघिल्ला संग्रहका उनका निबन्धहरू बढी आत्मकेन्द्रित र अस्तित्व चिन्तनसँग सम्बन्धित थिए भने अहिले उनी आफ्नो अनुभूतिसँगै समाजमा घटिरहेका विषयप्रति बढी सजग भएको देखिन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि आशातीत रूपमा उनी आफैंबाट बाहिर निस्कन नसकेको हो कि जस्तो महसुस हुन्छ । आजका पाठक हरेक बिधामा ब्रेकथ्रु नै खोजिरहेका छन् । चाहे त्यो प्रस्तुतिको हिसाबले होस् या भाषाशैली या विषयको छनोटको हिसाबले नै किन नहोस् । उनका निबन्धहरू प्राय:जसो निकै कोमलतापूर्वक सँगालेका स्मृतिहरू या जीवनका केही खुट्किलाहरू उक्लने क्रममा आइपरेका गारा अप्ठ्यारा क्षणहरू या प्रवासमा रहँदा त्यहाँ देखेका या भोगेका केही घटनाहरू वरपर घुम्छन् । उनले छनोट गर्ने विषय या प्रस्तुतिमा कन्सिस्टेन्सी छ तर अलि फरक चाहने पाठकले खोजेको जस्तो मुटु या दिमाग हल्लाइदिने केही चीज भने मिस भएजस्तो लाग्छ ।
कृष्णचन्द्रसिंह प्रधानजस्तो नेपाली साहित्यका मूर्धन्य स्रष्टा, युद्ध साहित्य भित्र्याउने क्याप्टेन जनकबहादुर राणा, नेपाली साहित्यलाई बहुत प्रेम गर्ने एलबी क्षत्रीहरूसँगको भेटघाट, सामीप्य र सम्बन्धका कुरा उनका संस्मरणात्मक अनुभूतिहरूमा निकै प्रेमील ढंगमा आएका छन् । प्रेम प्रदर्शनको कीर्तिमान नामक निबन्धमा अमर प्रेमको प्रतीकको रूपमा लिइएको ताजमहलप्रतिको उनको फरक मत निकै चिन्तनीय छ । उनी भन्छन् :
ताजमहल प्रेममहल हैन, अझ गरिब जनताका लागि पीडाको महल हो । त्यसो त ताजमहल चिहानघर हो र चिहानघर सधैँ सबैका लागि भय र पीडादायी नै हुन्छ । (पृष्ठ १०६)
केही निबन्धहरूमा यसरी फरक तर तगडा विचार आउनु उनको निबन्धको सुन्दर पाटो हो । कतिपय निबन्धहरूमा जीवनको भित्री तहको महसुससहित पोखिएका दार्शनिक चिन्तन भेटिन्छन् जसले उनका निबन्धहरूमा फरक स्वाद भरेका छन् ।
भनौँ कि नभनौँभित्रका निबन्धहरू भावना र अनुभूतिको गर्तबाट निस्किएका कोमल अभिव्यक्तिहरू हुन् । तर लेखक अलि बढी नै आफूकेन्द्रित भइदिँदा समाजसँगको संवादमा अलिकति उदासीन लाग्छन् । आफ्नै मात्र भोगाइ, देखाइ र विशलेषणको पर्खाल अग्लिँदै गर्दा कतिपय निबन्धहरू एकालापजस्ता पनि भएका छन् ।
यस संग्रहका तीनवटा निबन्ध मात्र शीर्षक परिवर्तन भएर र एउटा उही शीर्षकमा विसं २०५४ सालमा प्रकाशित ‘अर्थहीन अर्थहरू’ नामक निबन्धसंग्रहबाट राखिएको छ । हुन त लेखकले आफ्नो लेखकीय भनाइमा यी निबन्धहरू बीस वर्षअगाडिका पनि छन् र पुनर्लेखन भएका पनि छन् भनेर ‘सेफल्यान्ड’ गरिसकेको अवस्थामा भए पनि अघिल्लो संग्रहमा आइसकेका केही निबन्धहरू यसरी दोहोरिएर आउँदा पाठकलाई भने अलि खल्लो लाग्न सक्छ । निबन्धका पाठकहरू अलि बढी नै अपेक्षा राख्छन् जस्तो लाग्छ उनीसँग । निबन्ध खुद्रे लेखोट र छापामा मात्रै सीमित भइसक्यो भनी समीक्षकहरूले संशय पोखिरहेको बेलामा श्रीओम श्रेष्ठ रोदनजस्तो निरन्तर निबन्ध कर्ममा लागिरहेको स्रष्टाबाट केही बढी नै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक होइन र ?
प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७४ ०९:४३
वैशाख ३०, २०७४ कुमारी लामा
केही घटनाहरू खिसीका डिच्च दाँतहरू देखाउँदै घटिरहेछन् वरपरै । लाग्छ कहिलेकाहीं घटनाहरू बहुत शक्तिशाली भइदिन्छन् अनि मानिस निकै निरीह । स्विकार्नु सिवाय केही रहँदैन उपाय । टाउकै फोरे पनि हुनेवाला केही छैन ।
खासमा सम्बन्धको सुर्कौनीमा अल्झिएको जीवनले साह्रै अभर पार्दोरैछ मानिसलाई । सम्बन्धबेगरको जीवन छैन । तर उही सम्बन्धहरू किलकिलेमा अड्किएपछि के होला त्यो मनुवाको गति । लिंगको भेद छैन सम्बन्धका जस्केलोहरूमा । केही हानिकारक प्रवृत्तिहरू लिंगभन्दा माथिका कुरा हुन् । महिला पुरुष जसमा पनि त्यो घाती प्रवृत्ति हुन सक्ला । तर समाज, संरचना, स्थापित मान्यता, संस्कृति आदिका कुराले फेरि पनि स्त्रीहरू कसोकसो मझधारमा अड्किने रहेछन् । केही घटनाहरू यस्ता छन् :
टहराको बास भएको दुई वर्ष भइसक्यो पुतलीको परिवारको । घर बनाउने सुरसार अझै छैन । उमेर बीसको उत्तराद्र्धतिर लम्किँदै छ । एउटा आफ्नै छोरी र अर्को सौताको छोरो स्याहार्ने जिम्मा उनैको हो । धान रोप्न बित्न लागिसकेको थियो । काम मारामार । दिनभरको मेला पर्मले थाकेको ज्यान कतिखेर ढलाउ हुन्छ । तर भन्नेबित्तिकै ज्यानलाई ढाल्न कहाँ पाइन्छ र । दुई केटाकेटी र लोग्नेको ख्याल राख्नै पर्‍यो । लोग्नेसँग कुरा मिल्दैन । कुटाकुट परिबस्छ । तर लोग्ने–स्वास्नीको झगडा परालको आगो हो भन्ने थाहा छ उसलाई । मारामार गरेको भोलिपल्ट बिहानै फेरि मिलेर खेतबारीतिर लाग्छन् दुवै ।
त्यस साँझ टाउको दुखेर लम्पसार परेकी थिई पुतली । भात खान पनि उठिन । भोलिको धान रोपाइँ आजको यो टाउको रन्काइ । बेस्सरी पीरमा परेकी थिई । उसको लोग्ने सानुले भोलिको खेतालाका लागि मासु–रक्सी सबै ठीक पारेका थिए । केटाकेटीहरू खाएर सुतिगए । राति कतिखेर हो पुतली झल्यास्स ब्युँझिई । ओछ्यानमा सानु थिएन । रक्सी खाएर लडेछ कि भन्दै ढोका खोल्दा ढोकै अघि तुर्लुंग झुन्डिएको देखी सानु । पुतलीको होस हरायो । गाउँलेहरू जम्मा भए । तर सानुको सास उडिसकेको थियो ।
सानु किन झुन्डियो ? पुतली बेखबर छे । तर एउटा कुरा निश्चित हो, अब उसको जीवनको अझ कठिन यात्रा सुरु भइसकेको छ । बल बैंसमै विधवा भएकी छे । दुई केटाकेटी छन् । घर छैन । अब व्यवहारको भारीले त्यो मसिनो ज्यानलाई झन् कति ताच्छ होला म कल्पेर नै जिरिड्ग हुन्छु ।
के पुतलीले फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्छे ?
केटाकेटीसहितको विधवालाई स्विकार्न कोही निस्केला ? यस्तै अनेकौं प्रश्नहरूको पर्खाल खडा छ । (धादिड, धुनिबेसीकी हुन् पुतली)
पन्ध्र वर्ष बितिसकेछ बुहारी भएर त्यस घरको चुलो चौका सम्हालेको । यसैबीच तामाङनीबाट पूरै क्षत्रिनी भइसकेकी छ सजना । मंगलबारको वर्त, तीज र पञ्चमी, अरू पूजापाठ सबैमा पोख्त भइसकेकी छे । उसको बोलीचाली, रहनसहन सबै क्षत्रीमय बनिसकेको छ । यसै बीच एउटा छोरा र एउटी छोरी पनि हुर्काइसकी । ठाँटिएर हिँड्दा अझै बिहे भएजस्तो पनि देखिन्न देख्नलाई त । उमेर पनि त बल्ल तीस उक्लेकी हो । विद्यालयकालीन जुझारु स्वभाव सपनामा पनि देख्दिन अब त । सासूको कजाइँमा सम्पूर्ण रूपमा बुहारीधर्म निभाउँदै छे । पन्ध्र जनाको परिवारको चिया, खाना र खाजा नै उसको दिनचर्या हो । यही हो उसको संसार । ब्याचलर पढ्दाका चञ्चले पल अनि पाँचतारे होटलको जागिरको शान अब मात्र कहिलेकाहीं सम्झनामा झुल्किन्छ, बस् । पढाइ छुट्यो । जागिर छुट्यो । करिअर बिथोलियो । त्यसको बदलामा पाएकी छे दुई सन्तान र कहिले नसकिने घरधन्दा ।
लोग्ने पाँच वर्षदेखि दुबईमा काम गर्दै छन् । पैसा पनि राम्रै कमाउँदै थिए । वर्षको एकपटक भेट्न पनि आउँथे । तर लगभग डेढ वर्षदेखि अनेक बहानामा पैसा रोकियो । वर्षे बिदामा घर आएनन् । लोग्नेले पैसा पठाउन छाडेदेखि नै घर परिवारको व्यवहार बद्लिँदै गएको छ । सासू–ससुरा, देवर–देउरानीहरूको कर्के नजर तेर्सिन थालेको छ आजकल उनीतिर । जति काम गर्दा पनि कतै न कतै खोट लाउन भ्याइहाल्छे सासू । उसको तवाब डबलिएको छ । एकातिर लोग्नेको व्यवहार अर्कोतिर घरको । उसको धरातल झन् धरापमा पर्‍यो जब खोजतलासमा पत्ता लाग्यो कि लोग्ने अर्कै केटी च्यापेर बस्न थालिसकेको छ । उसले अफ्नो जीवनको उर्वर पन्ध्र वर्ष खर्चिएर बालबच्चा हुर्काई बसी तर अन्तमा लोग्नेले अर्कैतिर मन लगाइदियो ।
कसैले फिर्ता गर्न सक्छ सजनाले खर्चेको पन्ध्र वर्ष र अहिले भोगिरहेको मानसिक क्षतिको क्षतिपूर्ति ?
के नयाँ जीवन सुरु होला उसको ?
दुई बच्चाकी आमा, घरकी जेठी बुहारी सजनाको अघिल्तिर उभिएको छ अनिश्चितताको अग्लो प्रश्नचिह्न । (काठमाडौंवासी हुन् सजना )
उनी दिनेश । उमेर अड्तीस । पेसा खेती किसानी । केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा पनि गएका थिए । २०७२ को महाभूकम्पमा घरमा पुरिएर बितेकी हुन् उनकी दुलही र वर्षी नपुग्दैको छोरो । होसहवास पूरै हराएका थिए उनले । त्यो बिल्कुल स्वाभाविक थियो । दिउँसै गिलास रित्ताउँदै हिँड्न थालेको थियो । एकपटक लामै भलाकुसारी गरेको थिएँ मैले । उनी भन्दै थिए, मेरो त सबै सकियो । निकै दु:खी भएथें उनको अवस्था देख्दा । सहानुभूतिका केही शब्दबाहेक केही थिएन मैले दिन सक्ने । केही महिनापछि त फेरि ठीकैजस्तो देखिन थालियो । कामतिर पनि जान थाले । बूढी आमाको पनि रेखदेख गरेको देखियो । त्यसपछि गाइँगुइँ चल्न थाल्यो, दिनेशले त केटी हेर्दै छ रे । नचाहिँदो कुरा । स्वास्नी मरेको वर्ष नपुगी पनि कसैले बिहे गर्छ, म प्रतिवाद गर्थें कुरा सुनाउनेहरूसँग । मानवीय क्षति भएकाले सरकालले दिने रकम पनि तुरुन्तै पाए उनले । साथै विदेश बस्दाका साथीहरूले पनि पैसा जम्मा गरेर पठाइदिए भन्ने कुरो पनि सुनियो । ठीकै छ नि बिचराको परिवार नै सकियो, कम्तामा एउटा घर त बन्छ भन्ने लागिरह्यो । सधैँ सहानुभूति उर्लेकै हो उनीप्रति ।
तर जब त्यो कुरा कानमा पर्‍यो एक छिन रन्थनिएँ । दिनेशले फेरि बिहे गरेछ । दुलही बितेको लगभग दस महिनामै भिर्‍याए नयाँ दुलही । कम्तीमा एकवर्षे काजकिरिया त राम्ररी टुंग्याएको भए हुन्थ्यो भन्नेजस्तो लागिरह्यो । (उसको घरजमप्रतिको आपत्ति हैन मात्र महिला र पुरुषबीचको भिन्नतामाथिको मनन)
यस घटनासँगै पुतली झन् बढी सम्झनामा आइरहन्छे आजकल । दिनेशलाई त एक वर्ष पनि लागेन नयाँ जीवन सुरु गर्न तर पुतली...
पुतली र सजना त मात्र प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् । हामी वरिपरि हजारौं पुतली र सजनाहरू छन् । दिनेशहरूलाई अघिल्लिो सम्बन्धले खास फरक पार्दैन तर पुतलीहरूलाई ती जोडिएका नामहरूले कहिल्यै छाड्दैनन् । मरेर गए पनि या छाडेर गए पनि । जानेहरूका नाम उनीहरूको अस्तित्वमा टाँसिइसकेको हुन्छ जसले उनीहरूलाई अरू सम्बन्धमा अघि बढ्न रोकिबस्छ । उनीहरू यदि अघि बढ्न चाहे पनि अरूले छाडेको, बच्चाकी आमा या विधवाप्रति हाम्रो समाज चिसो छ । विधवा र बच्चाका आमाहरूको कुरा त परै जओस् अलिकति उमेर पुगेका महिलाहरूसम्म पनि पुरुषको दृष्टिबाट ओझेल पर्न थालिसक्छन् । ग्वाइँग्वाइँती हल्ला भने पिटिन्छन् उनीहरूका बारे । यी पितृसत्तात्मक अवधारणा र मान्यताका कारण भएका हुन् भन्छन् लेखक आहूति । अनले अर्को घतलाग्दो कुरो पनि उप्काए । महिलाहरू अवसर पाउँदा पनि नयाँ जीवनका लागि अघि बढिहाल्न आँट गर्दैनन् किनकि उनीहरूमा पनि पितृसत्तावादी सोच छ । परिवार, समाज, घर, माइती सोचिबस्छन् । र, ती सोचाइ आफंैमा उनीहरूभित्र रोपिएको पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो ।
पक्कै हो । तर कतिमय मान्यताहरू चालै नपाई हाम्रो मानसिकतामा रोपिइसकेको हुने रैछ । छोराहरूले जन्मजातै पाएको प्रिभिलेजले आफूलाई मालिक ठान्न थालिसकेका हुन्छन् । उनीहरूलाई हिँडडुल बोलचलादेखि घरायसी काममा पाउने छुटलगायतका कुराले नै भिन्न मानसिकता विकासमा सघाउ पुर्‍याइसक्छ । तर छोरीहरू सानै उमेरबाट बाउआमाको निगरानीमा रहेर बोलीचाली, चालढाल, सबै कुराको ख्याल गर्दै घरधन्दामा रत्तिन थालिसक्दा उनीहरूभित्र मेरो घेरा यही हो भन्ने दायरा तोकिइसक्छ नै । छोराहरू घरबाहिर साथीहरूसँग हिँडडुल गर्नु कैयौँ रात बाहिरै रल्लिनु पनि सामान्य हुन्छ । तर छोरीहरू ती कुराबाट पूरै वञ्चित हुन्छन् । समयको निश्चित दायरा तोकिन्छ छोरीका लागि घर छिर्न भने छोराको लागि सधैँ ढोका खुला ।
त्यही खुलापनको स्वाद चाख्दै आएको छोरा पछिसम्म पनि स्वतन्त्र रहन्छ । बिहेपछि पनि मन बराल्दा उनीहरू खासै ग्लानिको महसुस गर्दैनन् । उल्टै कतिले त खुलेआम च्यालेन्ज गर्छन् घरकी श्रीमतीलाई, छ त के गर्न सक्छस् गर् भनेर । तर सजनाहरू भने पढाइ करिअर र आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय घरकै लागि भनेर खर्चिसकेका हुन्छन् । जब लोग्नेले धोका दिएको चाल पाउँछन् त्यस बेला पनि रुनु र आफैंलाई तनावमा राख्नुसिवाय केही विकल्प भेट्दैनन् । किनकि अब त पढाइ छुटिसकेको छ, घरधन्दा र केटाकेटीको आची पखाल्दा पखाल्दै पहिलेको त्यो जोस जाँगर अनि जागिरप्रतिको मोह पनि हराइसकेको हुन्छ । अन्तमा हात लागे सुन्ना । कति त डिप्रेसनमा पनि जान्छन् ।
हामी ठूला र खोक्रो कुरा धेरै गर्छौं तर यस्ता मसिना लग्ने डरलाग्दा समस्याहरूले हाम्रो समाज आक्रान्त छ । कैयौँ पुलती र सजनाहरू खुनको आँसुमा डुबिबसेका छन् । तर कहिलेसम्म ? यसरी रोइबसेर त काम चल्दैन । महिलाको धराप अवस्थाको सिर्जनाका पछाडिका कारणहरू र समाधानका उपायहरू खेज्न अबेला भइसक्यो । मानवशास्त्री सुरेश ढकालको विचारमा महिलाहरूको यस्तो अवस्थाको पछाडि हाम्रो समाजमा विद्यमान लैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संरचनाका कारण निर्माण भएको मनोविज्ञानले ठूलो भूमिका खेलेको छ । उनले उजागर गरेको अर्को पाटो अझ बढी चोटिलो छ । शरीर, यौनिकता, स्वतन्त्रता र निर्णयको अधिकारसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आर्थिक स्रोतमाथिको पहँुच हो । यी जटिल सामाजिक, सांस्कृतिक संरचनाहरू तुरुन्तै नभत्किए पनि महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबल हुँदै जाँदा बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ । सजनाहरूको निरीहपनासँग पक्का पनि अर्थ जोडिएको छ । उनको परिवार र लोग्नेसँगको निर्भरताले पनि उनको पीडादायी अवस्थामा मुख्य भूमिका खेलेको छ । फेरि पनि प्रसंग जोड्न मन भयो आहूतिकै विचारको । उनी बारम्बार भन्ने गर्छन् स्वास्नीहरू घरबाट निस्किनुपर्छ । अहिलेको पारिवारिक संरचना भत्किनुपर्छ । भत्काउनुपर्छ । अनि मात्र यी लोग्नेहरू तह लाग्छन् । नत्र तह लाग्नेवाला छैनन् यिनीहरू ।
तह लाग्नु र लगाउन त छँदैछ । कतिले त तह लगाएकै छन् लोग्नेहरूलाई तर फेरि पनि कुरो आउँछ ती पिँधमा पिसिइरहेकाहरूको र उनीहरूले भोग्दै गरेको दर्दनाक पीडाको । प्रश्निल भई बस्छु—
कसले दियो होला अर्काको जीवनसँग खेल्ने यत्रो अधिकार ती पुरुषहरूलाई ?
सजना र उनी जस्तैले भोग्दै गरेको मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?
के सम्बन्धको सुर्कौनी महिलाहरूको घाँटी कस्नुलाई मात्र हो ?
मनन गर्ने हो कि ...
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७४ ०८:५३
‘केन्द्रको आँखाबाट ओझेल परेजस्तो !’
संस्कृते, गोर्खे र नेपाली भाषा
विज्ञान नपढेका वैज्ञानिक
वैशाख ४, २०७६